Customer Voice Archives - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
Mr. Kyaw Naing
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခရီးသွား အထုပ် ဆက်သွယ်ရန်
အဆုတ်ကင်ဆာကို စောစောသိပြီး စောစောကုသပျောက်ကင်းနိုင်စေဖို့
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မည်သည့်နေရာတွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သလဲ?
Immunotherapy ဖြင့် ကင်ဆာရောဂါကုသခြင်း
မ်က္စိ အျမင္ၾကည္လင္မူအတြက္ ေခတ္မီေသာပါ၀ါေဖ်ာက္ကုသနည္းမ်ား
ဝေ့ဌာနီဆေးရုံကြီး၏ကျောရိုးခွဲစိတ်မှုဌာနအား အမေရိကန်နိုင်ငံ JCI (Joint Commission International) မှ CCPC (Clinical Care Program Certification) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထပ်မံချီးမြှင့်ခံရခြင်း
COVID-19 မွ ကာကြယ္ရန္ သန႔္ရွင္းရမည့္အရာ (၄)မ်ိဳး
ဝေ့ဌာနီဆေးရုံကြီးသို့ လာရောက်ဆေးကုသလိုသူ လူနာများအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ခွင့်လမ်းညွှန်
COVID-19 ကြောင့် ဝေ့ဌာနီဆေးရုံကြီးကို လာပြီး ဆေးခန်းပြဖို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေပါသလား?
Mr. Kyaw NaingRead More
၁၁၁ 11ဧည့္ေဂဟာRead More
ေ၀့ဌာနီ ႏွလံုးစင္တာRead More
အဆုတ်ကင်ဆာကို စောစောသိပြီး စောစောကုသပျောက်ကင်းနိုင်စေဖို့Read More
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မည်သည့်နေရာတွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သလဲ?Read More
Immunotherapy ဖြင့် ကင်ဆာရောဂါကုသခြင်းRead More
မ်က္စိ အျမင္ၾကည္လင္မူအတြက္ ေခတ္မီေသာပါ၀ါေဖ်ာက္ကုသနည္းမ်ားRead More
ဝေ့ဌာနီဆေးရုံကြီး၏ကျောရိုးခွဲစိတ်မှုဌာနအား အမေရိကန်နိုင်ငံ JCI (Joint Commission International) မှ CCPC (Clinical Care Program Certification) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထပ်မံချီးမြှင့်ခံရခြင်းRead More
COVID-19 မွ ကာကြယ္ရန္ သန႔္ရွင္းရမည့္အရာ (၄)မ်ိဳးRead More
ဝေ့ဌာနီဆေးရုံကြီးသို့ လာရောက်ဆေးကုသလိုသူ လူနာများအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ခွင့်လမ်းညွှန်Read More
COVID-19 ကြောင့် ဝေ့ဌာနီဆေးရုံကြီးကို လာပြီး ဆေးခန်းပြဖို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေပါသလား?Read More
"ဒီေရာဂါကိုပ်ာက္ေအာင္ကုမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီးလာခဲ့တာ၊ ေပ်ာက္မယ္လို႔လဲယုံၾကည္တယ္" ဆိုတဲ့ ကင္ဆာ FREE ျဖစ္သြားသူ ႏွင္းသီရိခိုင္
Description: Patricia,afamous Myanmar actress underwent the ICL surgery (Intraocular Lens Surgery) at Vejthani Hospital, Bangkok, Thailand. Let's see the outcome, and what she thinks about the surgery and Vejthani hospital's services. #VejthaniHospital #ICL #Lasik #EyeSurgery #Patricia
hospitals hospitals I was living in Canada and was diagnosed with skin cancer on my face. The surgery was considered elective as it was not melanoma cancer, I would have to wait 12–14 months to have the surgery. It would have been done at no cost if I waited for the operation.
Patient: Mr. Kyaw Naing Surgeon : DR. Chada Chotipanvithayakul Procedure : PCI Center/Clinic : Vejthani Cardiac Center for more information https://www.facebook.com/nwaynway.latt.9/posts/202338424120929